ह्याडिक ऐन, सबै चीजको सुरूवात। पृथ्वीमा सब भन्दा पुरानो अवधि। | नेटवर्क मौसम विज्ञान
हडिक ईन, हडान वा हडानको रूपमा पनि चिनिन्छ, पृथ्वीमा सब भन्दा पुरानो अवधि हो। बुझ्दछ पृथ्वीको गठनबाट billion.4.550 the अरब वर्ष अघि करीव /,००० / 4.000.. billion अरब वर्ष पहिले। अवधि पूर्ण रूपमा सटीक छैन, बरु एक अनौपचारिक अवधि किनभने यी सीमा आधिकारिक रूपमा सेट वा मान्यता गरिएको छैन। सीमाना स्थापित गर्ने र विश्व स्तरमा स्ट्रटिग्राफी, जियोलोजी र भू-भूगोलशास्त्र अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइने आयोग हो स्ट्रटिग्राफीमा अन्तर्राष्ट्रिय आयोग.
यो अवधि, यति अज्ञात, उही समयमा हो हाम्रो ग्रह को शुरुवात। यो अनुमान गरिएको छ कि सम्पूर्ण सौर्य प्रणाली सम्भवतः ग्यास र धुलोको ठूलो बादलको बीचमा बनिएको थियो। हाइक एओन पनि अवधि हो जुन पृथ्वीमा ठूलो परिवर्तनहरू भइरहेको छ। ठूला ज्वालामुखी विस्फोटका कारण, र पृथ्वी र सौर्यमण्डलका थुप्रै भित्री ग्रहहरूले पनि ठूलो क्षुद्रग्रहहरूबाट ठूलो प्रभाव प्राप्त गरेको समयमा पनि। ती मध्ये एक पृथ्वीको विरुद्धमा मून थियो (जसको बारेमा हामीले हालसालै कुरा गरेका थियौं पृथ्वीको जिज्ञासा, पोइन्ट))।
1 ह्याडिक ऐनको प्रमाण
2 पृथ्वीमा जीवनको उत्पत्ति
3 पानीको सुरुवात
3.1 जीवनमा यसको उत्प्रेरक प्रभाव
ह्याडिक ऐनको प्रमाण
ईसुवाबाट सुपरक्र्याटिकल बेल्ट। सबैको सब भन्दा पुरानो माइक्रोबियल जीवाश्म पत्ता लगाइएको थियो, dating.3.480 बिलियन वर्ष पछि
खोज्दै सब भन्दा पुरानो चट्टान, हामी ग्रीनल्याण्ड, क्यानडा र अष्ट्रेलिया जाँदैछौं। तिनीहरू 4.400 अरब वर्ष पुरानो हो। २० औं शताब्दीको अन्तिम दशकहरूमा भेटिएको हडिक चट्टानहरू व्यक्तिगत जिरकोन क्रिस्टल खनिजहरू हुन्। यद्यपि तिनीहरू सबैभन्दा पुरानो ज्ञात खनिजहरू हुन्, र तिनीहरू पश्चिमी क्यानाडा र पश्चिमी अस्ट्रेलियाको ज्याक हिल्स क्षेत्रको तलछटमा धेरै गहिरो रूपमा लुकेका छन्, तिनीहरू चट्टानका संरचनाहरूमा छैनन्।
सब भन्दा पुरानो चट्टान संरचना जुन मितिबाट पहिले नै परिचित छ 3.800 लाखौं वर्ष। सब भन्दा पुरानो ज्ञात ग्रीनल्याण्ड मा छ, को रूपमा चिनिन्छ "ईसुवाको सुपरक्र्याटिकल बेल्ट"। तिनीहरू केही मात्रामा ज्वालामुखी डाईकहरू द्वारा परिवर्तन हुन्छन् जम्मा भएपछि चट्टानहरूमा प्रवेश गरे। डिएगो सेबास्टियन गोन्जालेज र मारीकल सिला गुटियरेजले लेखेको "जीवनको मूलको बारेमा धारणा" पुस्तकमा हामी टेक्निकल डाटासहित पाउँछौं, तर धेरै जादुई, एउटा प्रश्न जुन हामी आफैंले आफैलाई सोध्छौं। जीवन कहाँ सुरु हुन्छ? र ती हुन्, पहिलो शुरुका सबूतहरू, ईसुवाको सुप्रकोर्टिकल बेल्टमा, हडिक ऐनमा।
ग्रीनल्याण्ड तलछटहरु मा ब्यान्डेड फलाम संरचनाहरु छन्। सुरुमा यो विश्वास गरिएको थियो कि तिनीहरूले सम्भवतः जैविक कार्बन रहेको छ, जसले यो संकेत गर्दछ कि सम्भवतः पहिलो स्वयं-प्रतिकृति अणुहरू अस्तित्वमा आए। अब प्रारम्भिक प्रमाणहरू छन् कि जीवन इस्वा सुप्राकोर्टिकल बेल्टबाट आएको हो, वेस्ट ग्रीनल्यान्ड र एकिलिया टापुबाट पनि उही क्षेत्रबाट। यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि, वैज्ञानिक प्रमाणहरू त्यस क्षेत्रमा फेला परे पनि, हामी यसलाई विगतमा देखाउन सक्दैनौं। याद गर्नुहोस् कि पृथ्वी, केवल बनिएको थिएन, तर लगभग यसको गठन पछि, महाद्वीपी प्लेट्स को आवागमन जारी।
यसमा रचना गरिएको चट्टान ढाँचासँग कार्बन (C) १ 5,5, C13 को -.13. of को एकाग्रता छ। यो बायोटिक वातावरणको कारणले गर्दा यो हल्का C12 आइसोटोपले मनपराउँदछ। बायोमासमा सी १13 ले -२० र -20० को सांद्रता प्रस्तुत गर्दछ, रक संरचनाहरूमा पाइने सांद्रता भन्दा धेरै कम। यी प्रविधिबाट यो अनुमान गरिएको छ कि हाम्रो ग्रहमा जीवन वास्तवमै begin.3.850० मिलियन पहिले सुरु हुन सक्छ वर्षहरू, हडिक युगको अन्त्यमा।
यो ग्रह को गठन भएको कणहरु बीच, पानी को एक निश्चित मात्रामा भएको हुनुपर्दछ भनेर मानिन्छ। यी अणुहरू गुरुत्वाकर्षणको शिकार हुनु हुँदैन र केन्द्रबाट टाढा जाँदा तिनीहरू यसको सतहमा नै रहन्थे। ग्रहको गठनको %०% पुगेपछियी पानी अणुहरू, र अन्य अत्यधिक अस्थिरहरूसँग, सतहमा पनि पहिले नै धेरै मात्रामा फेला परेको हुनुपर्दछ। हिलियम वा हाइड्रोजन जस्ता भाग्न सक्ने थुप्रै महान ग्याँसहरूको अभाव उल्लेखनीय छ। यो विश्वास गर्न को नेतृत्व गर्न केहि विनाशकारी भएको हुनुपर्छ पहिलो वातावरणमा। परिकल्पनाहरू मध्ये, हामी Theia को सिद्धान्त छ, जुन हामीले त्यसमा छलफल गर्‍यौं अन्तिम लेख (point बिन्दु), बुझाइयो किन चंद्र त्यस्तै छ।
जीवनमा यसको उत्प्रेरक प्रभाव
१a1994 in मा लाजानो र मिलरले कसरी पानीलाई उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्‍यो भन्ने सुझावहरू दिइयो। उनीहरूले भने, यो लिंक समुद्री पनडुब्बी फ्यूमरोल्स मार्फत पानीको सर्कुलेसनद्वारा दिइनेछ। कुल पुनर्चक्रण समय १० करोड वर्षसम्म रहनेछ, तर कुनै पनि जैविक यौगिक º०० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रममा नष्ट हुन सक्छ। त्यसो भए क्रमिक चिसो भएपछि आदिम जीव १० किलोबासको जीनोमको साथ डीएनए-प्रोटीन हेटरोट्रोफ, यो विकसित हुन लगभग million मिलियन वर्ष लाग्छ yan,००० जीनको साथ साइनोब्याक्टेरियल जीनोममा।
र त्यहाँ केहि छ जुन हामीले भनेनौ, कि एक दिन सायद उत्तर प्राप्त हुनेछ। आज पनि उत्तर दिन ठूलो प्रश्न छ। जहाँसम्म जानिन्छ, जीवन कार्बन वा सिलिकॉनको रूपमा मात्र अस्तित्वमा हुन सक्दछ। हाम्रो ग्रहमा, यो कार्बनको रूपमा अवस्थित छ, सिलिकॉनको रूपमा छैन, जसलाई थाँहा छ कि हुनसक्छ यो अरू ठाउँमा छ भने। तर प्रश्न यो हो कि यदि त्यस्तो भएको हुन सक्ने सम्भावना शून्य भएमा जीवन कसरी विकसित हुने थियो?
यो अपरिहार्य छ कि यदि हामी राती यसको बारेमा सोच्छौं, हामी ताराहरूमा हेर्छौं। आफैंलाई आउने महान् विचारहरु द्वारा आक्रमण गर्न दिदै।
हदिक aeon पछि, पुरातन काल यदि तपाईं कसरी जान्न चाहानुहुन्छमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Hadic Aeon
हावा चिल गणना कसरी गर्ने?
--डिग्री वृद्धिले ओजोन तहलाई धम्की दिन्छ